Taratasy hetsika sy loharanon-karena ao an-dakilasy - Filankevitry ny morontsiraka afovoany
Mora kokoa noho ny eritreretinao ny fanaovana ny faharetana ho fomba fiaina. Ny taratasy fampahalalam-baovao azo alaina sy ny loharanom-panabeazanay dia manampy amin'ny famporisihana sy fanatsarana ireo fanao maharitra ao an-tokantranonao, sekoly ary toeram-piasanao:
Loharano fampahalalana momba ny mpianatra / mpampianatra
Manana andraikitra amin'ny fitantanana ny fako na fanodinana fako any amin'ny morontsiraka afovoany? Mila fantarina hoe inona no mitranga amin'ny fanodinanao na ny fomba fiasan'ny fanariam-pako? Download our Famerenana sy fitantanana ny fako any amin'ny morontsiraka afovoany – Loharanon-baovao – feno vaovao farany sy rohy mankany amin'ny horonan-tsary mifandraika amin'ny fitantanana ny fako, ny fanodinana, ny fambolena zaridaina ary ny fampihenana ny fako any amin'ny morontsiraka afovoany.
Fandaminana ny fandokoanao amin'ny fanodinana
Sarin'ny Facilité Recovery Materials be ataonay ho anao loko! Eo no andaminana ny fanodinana rehetra.
Wriggling Worms Coloring
Sarin'ny toeram-piompiana kankana holokoinao! Ianaro ny momba ny sakafo tian'ireo mpihetsiketsika hohanina.
Mr Yellow ny Recycle Bin Fandokoana
Sarin'i Mr Yellow ho lokoinao! Ianaro ny zavatra rehetra azonao averina ao amin'ny dabam-baravaranao mavo.
Ramatoa Green the Garden Bin Coloring In
Sarin'i Ramatoa Green holokoinao! Ianaro ny zavatra rehetra azonao atao zezika ao amin'ny dabam-pako maitso.
Lil' Red ny Fandokoana Fako ankapobeny
Sarin'i Lil' Red ho lokoinao! Ianaro ny zavatra rehetra azonao ariana ao amin'ny dabam-baravaranao mena.
Fandokoana Telo Bins
Fantatrao ve hoe inona ny fako miditra amin'ireo daba 3 samihafa? Loko mena ho fako, maitso ho an'ny zaridaina ary mavo ho an'ny fanodinana!
Fandokoana andro fanangonana
Sarin'ny kamiao manodina dabam-pako holokoinao.
Fandokoana harona plastika
Mitondra ny kitaponao ho any amin'ny fivarotana lehibe ve ianao? Ianaro ny antony maha-zava-dehibe ny manao izany amin'ny fandokoana mahafinaritra amin'ny sary!
Bokikely fanaovana hetsika
Pejy enina mahafinaritra ho vitanao mandritra ny fianarana momba ny fanodinana! Manana find-a-words, labiera, spot-the-difference ary crossword izahay mba hahatonga anao ho sahirana.
Lalao mora sy mahafinaritra hampianarana ny ankizy momba ny 4Rs – Reduce, Reuse, Recycle and Recover.
Kamiao azo aforitra
Mamorona kamiao Cleanaway anao manokana miaraka amin'ity takelaka azo aforitra ity.
Amporisiho ny famoronana miaraka amin'ity taratasy fandokoana kamiao ity.
Ny ankizy dia tia kamiao fako! Andeha hojerentsika ny fomba hiarovana ny fiara manodidina ny kamiao amin'ny andro fanariam-pako ary hojerentsika izay mitranga amin'ny fako avy amin'ny dabam-pako mena rehefa tonga eo amin'ny fanariam-pako.
Andian-dahatsary mampianatra anao rehetra momba izay entana azonao amboarina ao amin'ny Central Coast.
Taratasy zava-misy momba ny fanodinana sy ny faharetana
Makà ny zava-misy momba ny fanodinana ary mianara momba ny faharetana amin'ny alàlan'ny taratasin-javatra azo pirinty eto ambany:
Baoritra & taratasy
Fanafoanana ny angano fanodinana
Raiso ny zava-misy marina momba ny sasany amin'ireo angano momba ny fanodinana mahazatra indrindra: